1. ခငျြးအမြိုးသားတို့၏လကျထပျထိမျးမွားရေး - ဦးတငျမောငျအေး(ဘီအေ၊ ဘီအယျလျ)
... Chin Tribes of Burma - Laura hardin carson The Image of War : service on the Chin Hill ပလောင်တို့မင်္ဂလာဆောင် - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့် ရှမ်းတို့မင်္ဂလာပွဲ - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့် ပပ်ꨵလိꨀ်ꨳ ꨀꨮꨤမ်းပꨓ်ꨕွꨓ်း(မင်ꨲꨀလုꨲ) ...
2. ယဉျကြေးမှု - ဒါရိုကျတာဆရာမွငျ့
eBook file size: 76.5 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၆၉ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလ၊ အမှတျ ၂၈၆ ထုတျ သှေး​သောကျမဂ်ဂဇငျးတှငျ ပါသော ဆောငျးပါး ဖွဈပါသညျ။ Download -Related Articles- ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
3. ပငျးတယနယျ​​မွေ နှငျ့ ရှဥေမငျဘုရားသမိုငျး - သီလဝ ပွုစုသညျ
... ရွှေတိဂုံစေတီတော် - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့် ꨀွင်းမူးမိူင်းသေ မိုင်းဆယ်စေတီတော်သမိုင်း ဓမ္မစေတီ - မစ္စတာမောင်မှိုင်း မန့်ခမ်းစေတီတော် သမိုင်း(နမ့်ခမ်းမြို့) သီပေါမြို့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးနှင့်ဝိဇယမာန်အောင် ...
4. သမိုငျးဝငျ မိုးဗွဲမှတေျောဓာတျစဈ ဘုရားသမိုငျး
... ဦးနာဂိန္ဒာလင်္ကာရ တံတားဦးတည် မင်္ဂလာစေတီမော်ကွန်း - တိုးတက်ရေးဦးသန်းဖေ သဲပုံစေတီပွဲ - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ) ရွှေတိဂုံစေတီတော် - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့် ꨀွင်းမူးမိူင်းသေ မိုင်းဆယ်စေတီတော်သမိုင်း ဓမ္မစေတီ ...
5. ပလောငျတို့မင်ျဂလာဆောငျ - ဒါရိုကျတာဆရာမွငျ့
eBook file size: 94.3 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၆၇ ခုနှဈ၊ ဩဂုတျလ၊ အမှတျ ၂၅၉ ထုတျ သှေးသောကျမဂ်ဂဇငျးတှငျ ပါသော ဆောငျးပါး ဖွဈပါသညျ။ Download Related Articles ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
6. ဝ တိုငျးရငျးသားမြား၏ လူမှုစီးပှားရေးဘဝ - ​ပါမောက်ခဒျေါတငျရီ
eBook file size: 7.40 MB ebook pages: 142 Publication: ၁၉၉၉ ခုနှဈ၊ ဇူလိုငျလ၊ ပထမအကွိမျ၊ တက်ကသိုလျမြားပုံနှိပျတိုကျ၊ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ။ Download Related Articles ၀ နယ် - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့် ...
7. ၀တို့၏တမလွန်ဘ၀ - လင်းဦး
eBook file size: 1.19 MB ebook pages:3Publication: ? Download -Related Articles- ၀ နယ် - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့် ဒို့သင်္ဂဟ လ နဲ့ ၀ - ဗိုလ်တင်ဦး နယ်ခြားဒေသမှ ပန်ပေး - ဖိုးတင့် ...
8. ဒို့သင်္ဂဟ လ နဲ့ ၀ - ဗိုလ်တင်ဦး
eBook file size: 1.31 MB ebook pages: 11 Publication: မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၊ စာမျက်နှာ(၁၂၈ မှ ၁၄၃)၌ လာရှိသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ခုနှစ်နှင့်လကို မသိရပါ။ Download -Related Articles- ၀ နယ် - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့် ...
9. ရှမ်းတို့မင်္ဂလာပွဲ - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်
eBook file size: 541 KB ebook pages: 8 Publication: ၁၉၆၇-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
10. ၀ နယ် - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်
eBook file size: 533 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၅၄-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
11. ဒါရိုက်တာ ဆရာမြင့်၏ စာပေါင်းစု - နန်းကြေးမုံ
eBook file size: 296 KB ebook pages:6Publication: ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်းမှ ဆောင်းပါး။ ခုနှစ် မသိရပါ။ download -Related Articles- ရှမ်းပြည်ကြေးမုံ (ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်-ရေး) ကျော့ခေါင်းမှ စော်ဘွားသို့ ...
12. ရှမ်းစာဆိုတော်များ - ဒါရိုက်တာ ဆရာမြင့်
eBook file size: 396 KB ebook pages: 8 Publication: 1967, December Download -Related Articles- ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
13. ရွှေတိဂုံစေတီတော် - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်
eBook file size: 92.3 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၆၉-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ်၊ သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်း၌ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
14. ကျော့ခေါင်းမှ စော်ဘွားသို့ - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်
eBook file size: 55.8 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်းတွင်ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
15. ရှမ်းပြည်ကြေးမုံ - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်
eBook file size: 297 KB ebook pages: 77 ပုံနှိပ်ခြင်း - စာပေဗိမာန်ဆုရ၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ စိန်ရတနာပုံနှိပ်တိုက်၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ တာမွေ၊ ရန်ကုန်မြို့။ download -Related Articles- ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...